DEG DEG:- Galmudug oo ku wareejisay Kenya haweeneydii ay kasoo furteen kooxaha burcad badeeda – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Galmudug oo ku wareejisay Kenya haweeneydii ay kasoo furteen kooxaha burcad badeeda
Wararka naga soo gaaraya magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in maamulka Galmudug uu goordhaw dowladda Kenya ku wareejiyay haweeneydii Kenyaatiga aheyd oo ay habeen hore ciidankooda kasoo furteen kooxo burcad badeed Soomaali ah.
Haweeneydaan oo lagu magacaabo Lois Njoki Weru islamarkaana 41 jir ah ayaa ciidanka nabad-sugidda maamulka Galmudug kasoo furteen koox burcad badeeda ah oo muddo 2 sano ah kooxdaasi afduub ugu haystay.
Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi Carabeey ayaa munaasabad ka dhacday xarunta madaxtooyadda Galmudug ee Cadaado waxa uu safiir ku-xigeenka Kenya ee u fadhiya Soomaaliya ku wareejiyay Lois Njoki Weru oo ah haweeneydii ay kasoo bad-baadiyeen kooxaha burcad badeeda Soomaalida ah.
Safiir ku-xigeenka Kenya ee Soomaaliya Xasan Maxamed Cabdi oo goobta munaasadda ka dhaceeysay ka hadlay ayaa marka hore u mahad-celiyay ciidamada maamulka Galmudug ee soo bad-baadiyay haweeneyda Kenyaanka ah ee maanta lagu soo wareejiyay.
Sidoo kale, madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi Carabey oo isna goobtaasi ka hadlay ayaa sheegay in Galmudug ay ka go’an tahay la dagaalanka burcad-badeeda iyo Al-shabaab islamarkaana aysan marnaba ogolaan doonin in deegaanada Galmudug lagu dhibaateeyo dadka aan waxba galabsan.
Ugu dambeyntii, haweeneyda Kenyaanka ah Lois Njoki Weru oo wejigeeda ka muuqday farxad aan la qiyaasi karin ayaa goordhaw ka dhooftay garoonka diyaaradaha magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud, iyadoona u dhooftay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya.